မယ်သံ: ပျားရည်မြစ်တစ်စင်း သို့ သမီးလေး အတွက် ကျမ ရဲ့ချစ်ခြင်း
Posted by Thandar Lwin at Sunday, October 27, 2013
Anonymous October 28, 2013 at 2:17 PM
Mee Chit October 29, 2013 at 5:10 PM
Thandar Lwin August 21, 2014 at 10:22 PM
Thandar Lwin Poseidon Vasilliou မဖတ်ပဲနဲ့ များ လာလိုက်ခ်နေသေးတယ်အေ ဟွန့်
October 27, 2013 at 4:30pm · Like
Poseidon Cyan ရေးနေတာ ရေးလိုက် ပြန်ဖျက်လိုက်.. အရင် ဟေမာ ငိုတဲ့ပိုစ့်ကတည်းက ရေးနေတာ။ ပြန်ပြန်ဖျက်မိနေတာ
October 27, 2013 at 4:31pm · Unlike · 1
Thandar Lwin ရှေ့ဆက် ငို နေရင်တော့ နင့်ဆီပို့ထားမယ် စိတ်ကူးတယ်
October 27, 2013 at 4:34pm · Like · 1
Poseidon Cyan သိပါဘူး။ အ၇င်ကဆို မချစ်ဘူး မချစ်ဘူး ပြောပြောနေတာ. ဟေမာ ငိုတဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးဖြစ်သေး။း) ခုတခါ ပြန်ဖတ်ရတော့ မျက်ရည်တောင်ဝဲ
October 27, 2013 at 4:35pm · Unlike · 1
Thandar Lwin ဟုတ်တယ် မချစ်ဘူး မချစ်ဘူးဆိုတာ အလိုစွတ်မလိုက်မိအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မာန်တင်းတာ ....
October 27, 2013 at 4:37pm · Edited · Like · 1
Poseidon Cyanး) အမေတွေ က ဒီလိုပါပဲ။
October 27, 2013 at 4:37pm · Unlike · 1
U Kyaw Htwe အမေ့ အပေါ်ပိုနားလည်ပြီဟုတ်
October 27, 2013 at 5:23pm · Unlike · 1
Pu Tay မိခင်တယောက်ရဲ့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ ရေးတတ်လိုက်တာ
October 27, 2013 at 5:25pm · Edited · Unlike · 1
Pandora Blogopoet wow! ကျေးဇူးပဲ Thandar Lwin, နွေးနွေးထွေးထွေးလေး ခံစားလိုက်ရတယ်။
October 27, 2013 at 5:39pm · Unlike · 1
May Zin Aye ဖတ်ရင်းနဲ့ ဟေမာ နဲ့ သူ့ အမေ ကို မြင်ယောင်ပီး သဘောကျ ပြုံးနေမိတယ်။ ကိုယ့် ဆန္ဒတွေက သူတို့ရဲ့ နောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ အမေတိုင်း လိုလိုဆီက ကြားရတယ်နော်။
October 27, 2013 at 6:50pm · Like
Khayay Phyu အမလေး ကောင်းချက် မယ်သံဘယ်တုန်းက ဒီလောက်စာသားတွေညက်သွားပါလိမ့် မေမေ့မေတ္တာကြောင့်နေမှာ
October 28, 2013 at 1:00pm · Like
Pancherry Lin Happy Mother Day to you my sis!
May 11 at 2:21pm · Like